Global Voices teny Malagasy » Iran: Tsy hisy mofomamy omena ny vehivavy Iraniana amin’ny andro natao ho azy ireo · Global Voices teny Malagasy » Print
Iran: Tsy hisy mofomamy omena ny vehivavy Iraniana amin'ny andro natao ho azy ireo
Voadika ny 09 Mey 2009 15:15 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika avylavitra
Sokajy: Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Tantara, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Na tsy mankato ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy  aza ny governemanta Iraniana ary nanàkana ireo vehivavy mafana fo niketrika sy nanoman-javatra ho fankalazana io andro io efa ho 30 taona lasa izay, dia nahatsiaro ny 8 Marsa hatrany ny mpitoraka blaogy Iraniana sy ireo vehivavy mafana fo hanomezam-boninahitra ny vehivavy ao Irana sy manerana ny tany.
Nanao latsakemboka  ho an’I Aliyeh Eghdam Doust, vehivavy mafana fo voafonja, ireo blaogy sy tranonkala samihafa toy we-change sy ny feminist school.
Anisan’ireo voasambotra  tamin’ny 12 Jona 2006 i Aliyeh Eghdam Doust, nandritry ny hetsika am-pilaminana tao Teheran ary nahazo famonjana telo taona ho setriny. Miasa mafy tokoa ireo vehivavy mafana fo mba hanafàhana azy.
Ny fikambanana Rahavard , ivon-toerana ara-kolotsaina Iranianina ao Alemana, dia nandefa ny karatra firarian-tsoa etsy ambony ho an’i Aliyeh, izay mivaky toy izao: Miarahaba anao sy ireo vehivavy iraniana rehetra voafonja nahatratra ny andron’ny vehivavy.
Araka an’ i Siprisk[fa], mpitoraka blaogy iranianina, dia tokony hisaina lalina isika momba ny “zava-misy” samihafa mianjady amin'ny vehivavy ao amin’ny fireneny. Ambarany fa ireo vehivavy iraniana dia iharan'ny tsindry hazo lena avy amin'ny fanjakana, ny fianakaviany, ny sekoly sy ny anjerimanontolo, ny fivavahana sy ny fomban-drazana”.
Mampahafantatra antsika I We-change fa tsy nanome alàlana ny vehivavy iraniana hanao fihaonana tao Teheran ny mpitandro ny filaminana tamin’ny 8 Marsa, ary dia nahavita nàka mihitsy ny mofomamy hitantsika eto ambany izay nokarakarain’ireto vehivavy mba hankalazàna ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy.
Namoaka  hafatra izay nolazainy fa avy amin'ireo mpitoraka blaogy maro i Deemohsen. Ity hafatra ity dia milaza fa ataon'ny fanjakana anjorom-bala ireo vehivavy ao Irana, ary anentanany koa fa tokony hajaina ny zon’ny vehivavy araka ny fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavin’i Iran.
Namoaka  sary lehibe momba ny 8 Marsa i Eshterak izay anasàna ny vehivavy hamboraka ny olana mahazo azy ireo satria ny fahanginana = fahafatesana!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/09/2239/
 ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Day
 Nanao latsakemboka: http://www.feministschool.com/english/spip.php?article250
 fikambanana Rahavard: http://www.rahaward.org/archives/2009/03/post_4230.php
 Araka an’ : http://siprisk.blogspot.com/2009/03/blog-post_07.html
 Mampahafantatra : http://www.we-change.org/spip.php?article3775